चलचित्र पत्रकारमा चुनावको सरगर्मी को हुदैछ निर्बीरोध, को कसको प्रतिस्पर्धी (भिडीयो)FilmyFanda: Nepal's No. 1 Entertainment news portal site
को हुदैछ निर्बीरोध, को कसको प्रतिस्पर्धी (भिडीयो)
काठमाडौं । सधै अरुको समाचार तयार पार्ने चलचित्र पत्रकारहरु अहिले आफ्नो हकहितको लागि जुटेका छन् । आउँदै गरेको चलचित्र पत्रकार संघको साधारण सभालाई लक्षित गरी चहल पहल शुरु भएको हो । नेपाल चलचित्र पत्रकार संघ केन्द्रिय कार्यालयको साधारण सभा झण्डै डेढ महिना बाँकी हुँदैगर्दा चलचित्र पत्रकारहरुमा भन्ने सरगर्मी निकै बढ्न थालेको छ । यतिसम्म भईसकेको छ की एउटा मिडीया हाउसको पत्रकार अर्को मिडीया हाउसको पत्रकारसंग भेट गर्न जाने र आफ्नो पक्षमा वातावरण बनाउन समेत पछि परेको छैन ।
नयाँ सदस्यहरुमा देखिएको उत्साह र संघको गतिविधीले गर्दा पनि साधारण सभाको सरगर्मीबढेको हो । मनोरञ्जन क्षेत्रमा क्रियाशिल पत्रकारहरुलाई संगठित गर्न र उनीहरुकै हितको लागि चलचित्र पत्रकार संघ गठन गरेको संस्थापक अध्यक्ष भरत शाक्यको भनाई छ । वि.सं. २०४९ सालमा नेपाल समिक्षक समाजको साधारण सभा भएको थियो । उक्त साधारण सभामा निर्वाचन हारेकाहरुले चलचित्र पत्रकार संघको गठन वि.सं. २०५६ सालमा गरिएको भरत शाक्यको भनाई छ । त्यसपछि चलचित्र पत्रकार संघ झण्डै २ बर्ष पछिमात्र नेपाल पत्रकार महासंघसँग आवद्ध भएको हो ।
संस्था गठनको १७ बर्षमा संघले भरत शाक्य, विदुर गिरी शान्तिप्रिय गरी ३ अध्यक्ष पाईसकेका छन् ।आउँदो फल्गुनको २५ गते हुन लागेको संघको साधारण सभाको तयारी हुदै गर्दा नयाँ कार्य समितीमा को आउने भनेर चर्चा चल्न थालिसकेको छ । संघले गरेको आजसम्मको उपलब्धी हेर्ने हो भनेर चलचित्र पत्रकारहरुको लागि संघ गठन गर्नु र केही जिल्लामा शाखा खोल्न सक्नु मात्रै हो भन्दा फरक नपर्ला ।
चलचित्र पत्रकार संघले हाल सम्म दाङ, पोखरा, बुटवल, चितवन, हेटौडा, पूर्वाञ्चल लगायतका ठाउँहरुमा शाखा विस्तार गरिसकेको संघका अध्यक्ष शान्तिप्रियले बताएका छन् । यस्तै संघले हरेक बर्ष केही चलचित्र पत्रकारहरुलाई बार्षिक रुपमा सम्मान गर्दै आईरहेको पनि छ । यसै बर्ष ईमेज टेलिभिजन र ईमेज एफ एम मा कार्यररत संचारकर्मी श्याम अर्याल र संचारकर्मी तुलसी गिरी भावुकलाई सम्मान गरिएको हो ।
संघले भूकम्पबाट प्रभावित भएका केही संचारकर्मीहरुलाई पनि नगद हस्ताणतरण गरिएको थियो । तर भूकम्प पिडीत चलचित्र पत्रकारहरुलाई गरिएको नगद हस्तान्तरण कार्यक्रममा केही कार्यसमिती भित्रैका पदाधिकारीहरुले चित्त बुझ्दो नभएको गुनासो पनि राखेका छन् ।साधारण सभा आउँदै गर्दासंघको गतिविधी भन्दा पुराना सदस्यहरु र नयाँ बन्न लागेका सदस्यहरु साधारण सभालाई लिएर उत्साहित भएका छन् । संघको खातामा हाल कति रकम छ र दुई बर्ष सम्म संघ किन नविकरण भएन भन्ने प्रश्नमा कार्यसमितीमा रहेका व्यत्तिहरुको आफ्नै धारणा रहेको छ ।
संघका अध्यक्ष शान्तिप्रियले संघ नविकरण नभएको २ बर्ष भएको बताएका छन् । किन हुन सकेन भन्ने प्रश्नमा उनले संस्थाहो दुई बर्ष त ठूलो कुरै रहेन भन्ने प्रतिप्रश्न गरेका छन् । उनले अझ जहाँ पनि संघ संस्थामा यहि हुने त हो समेत भनेका छन् । यता कोषाध्यक्ष कुवेर डंगोलले संघको खातामा कति रकम छ भनेर प्रश्न गर्दा अकमकिए ।
शुरुमा यो बर्षको हिसाब किताब भएको छैन भन्दै उनले अनुमानित तीन लाख हुनुपर्ने बताए । अनि यतिका महिनासम्म संघको घर भाँडा किन तिरीएन भन्ने विषयमा उत्तर दिन सकेनन् र यो विषयमा आफुलाई थाहा नभएको जानकारी दिए । संघको कार्यालय बर्षको तीन चार पटक मात्रै खुल्नु र घर भाँडा समयमै नतिर्नु जस्ता संघको पछिल्लो गतिविधी प्रति केही सदस्यहरुको गुनासो समेत रहेको छ ।
तर केही पदाधिकारीहरुले भने संघको कार्यालय रहेको घरभाँडा समयमै तिर्ने गरेको समेत दावी गरेका छन् । जे होस् शान्तिप्रिय नेतृत्वको कार्य समीतीले संघलाई केही थप उचाई दिएको र केही शाखाहरु विस्तार गरेको केहीको भनाई छ । संघले यस अघि चितवन शाखाका अध्यक्ष रवी अधिकारीलाई आजिवन सदस्य हुन नपाउने भन्दै कार्वाही गरेको थियो ।
अब रवी अधिकारी फेरी संघमा आउन पाउने की नपाउने भन्ने प्रश्नमा एक उपाध्यक्षले कार्वाही हो फिर्ता हुन पनि सक्छ भनिएको छ । चलचित्र पत्रकारकै लागि गठन गरिएको संघले सदस्यलाई आजिवन कार्वाही गर्नु कतिको औचित्यपूर्ण होला या उनको गल्तिको प्रकृतीले कतिसम्म कार्वाही गर्न मिल्छ भन्ने कुरा संघका पदाधिकारीहरुलाई नै थाहा होला ।
यसो त यस अघि संघले कार्वाही गरेको अनुप भट्टराईलाई कार्वाही फुकुवा गरिसकेका छन् । यता ३ बर्ष सदस्यता नविकरण नगरेको भन्दै माउण्टेन टेलिभिजनमा कार्यरत कुमार आचार्यको सदस्यतानै खारेज गरेको थियो । नविकरणकै कारण सदस्यता खारेज गरेकोमा अहिलेका कार्य समिती जिम्मेवार नभएको पदाधिकारीहरुले बताएका छन् ।
पदाधिकारी मध्येका महासचिव सन्दिप सापकोटाले कुमार आचार्यको सदस्यता खारेज हुनुको कारण यो भन्दा अघिल्लो कार्य समिती रहेको दावी गरे । तर अघिल्ला कार्य समितीका अध्यक्ष एंव निवर्तमान अध्यक्ष विदुर गिरीले सदस्यहरुकै हक हितको लागि खुलेको संस्थाले सदस्यता खारेज नगर्ने बताए । उनले कुमार आचार्यको विषयमा नविकरण नगरिएकोले मताधिकार नपाएको तर पछि नविकरण गर्न पाउने बताए । यता कुमार आचार्यको नाम संघको सुचिमा नभेटिएपछि खारेज गरिएको बुझियो रउनले आफु पनि संघमा रहन ईच्छुक भएको भन्दै आफ्नो सदस्यता खारेजको विषयमा कुनै प्रश्नै नगरी नयाँ सदस्यताको फारम भरेर बुझाईएको समेत बताए । ११ बर्ष सम्म संघमा रहेको आचार्यले संघले नविकरणको कारण आफुलाई खारेज गरेको र नयाँ सदस्यताको फारम भर्न लगाएकोमा दुख व्यक्त गरे। खास कुरो के हो संघले नै जानुन् ।
अबको साधारण सभापछि संघले एउटा नयाँ खाका बनाएर अघि बढ्छकी भन्नेमा सबै चलचित्र पत्रकारहरु रहेका छन् ।चलचित्र पत्रकार संघ नेपाल पत्रकार महासंघको एसोसिएट संस्था हो तर नेपाल पत्रकार महासंघको जस्तै यसको नियम भने छैन । चलचित्र पत्रकार संघको विधान अलि फरक छ ।सदस्यता लिने वित्तीकै कार्य समितीका पदाधिकारीमा उम्मेद्वारी दिन पाउने, नयाँले पनि पार्षदमा उम्मेद्वारी दिन पाउने लगायत नियमहरु रहेका छन् । यो सँगै नयाँ सदस्यताका लागि पन्ध्रसय रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ । सदस्यता लिईसकेपछि महासंघ शुल्क सात सय पचास रुपैया थप दिनुपर्नेछ । संघले माघ १४ गतेसम्म सदस्यता खुल्ला गरिएको छ भने साधारण सभाको केही दिन अघिसम्म नवीकरणको समयसिमा तोकिएको छ ।
संघको केही निती नियमहरु परिवर्तन गनुपर्ने देखिएकोले संघले विधान संसोधन समिती तयार गरेको छ । संस्थापक अध्यक्ष भरत शाक्यको संयोजकत्वमा विदुर गिरी, डब्बु क्षेत्री, शान्तिप्रिय लगायतको सदस्य रहने गरी विधान संशोधन समिती बनाएको हो । अब साधारण सभाको बन्द शत्रमा आएको प्रस्तावहरु र केही आवश्यक निती नियमलाई यो समितीले संशोधन गरिनेछ ।यता नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव उजीर मगरले शाखा संस्थाहरुले प्राय महासंघकै विधान प्रयोग गरिरहेको बताए भने एसोशियट संस्थाहरुले फरक विधानहरु बनाएको बताए । उनले कुनै पनि संस्था संस्थाका सदस्यहरुको लागि हुने भएकोले सदस्यहरुकै हक हितलाई सोचेर बनाउनु पर्ने बताए । अन्य क्षेत्रमा भन्दा चलचित्र क्षेत्रका पत्रकारहरु अझ सक्रिय र चञ्चले हुने भएकाले यो संघले फरक विधान तय गरेको हुनसक्ने उनले बताए । उनले संघका सबै सदस्यहरुलाई मान्य हुने गरी विधान संशोधन गर्न सकिने पनि बताएका छन् ।
भmण्डै एक महिनाभन्दा बढीसमय रहँदा रहँदै संघको साधारण सभाको सरगर्मी चलचित्र पत्रकार संघमा देखिएको हो । विभिन्न मिडीया हाउसमा कार्यरत चलचित्र पत्रकारहरुले आफुलाई अब्बल ठान्दै उमेद्वारी अनौपचारीक रुपमा घोषणा गरिएको छ ।उम्देवारी घोषणमा कतिपय नयाँ छन् भने कतिपय हालकै पदाधिकारी भित्रका छन् । चलचित्र पत्रकार संघको साधारण सभालाई लिएर केही आकांक्षीहरु आफ्नो मिडीया हाउससम्मै आएर लबिङ शुरु गरेको समेत निवर्तमान अध्यक्ष विदुर गिरीले बताए । उनले ईच्छा भन्दा पनि सदस्यको हक हितको काम गर्नको लागि संघमा आउन र सबैसँग सहमती गरेर आउन आकांक्षीहरुलाई सुझाव दिएको बताए । यता संस्थापक अध्यक्ष भरत शाक्यले पनि केही पत्रकारहरुले उमेद्वारी दिन लागेको जानकारी गराएको बताएका छन् । उनले सबैलाई संघको राम्रो कार्य सम्पादन, सदस्यहरुको अधिकार र हक हितको काम गर्न सुझाव दिदै सहमति कायम गर्न सबैलाई अनुरोध गरेको बताएका छन् ।
हाल सम्म आगामी साधारण सभालाई लक्षित गरी अध्यक्षको पदका लागिछ जनाले अनौपचारी उमेद्वारी घोषणा गरेका छन् । जसमा टिभी फिल्मीमा कार्यरत एंव हाल कार्यसमितीका उपाध्यक्ष विष्णु सुवेदी, नयाँ पत्रिका दैनिकमा कार्यरत एंव हाल कार्यसमितीका उपाध्यक्ष नै लक्ष्मण सुवेदी, सिनेखबर अनलाईन म्यागजिनका संञ्चालक एंव चलचित्र सेन्सर बोर्डका सदस्य हाल कार्यसमितीका महासचिव सन्दिप सापकोटा, राजधानी दैनिकमा कार्यरत डब्बु क्षेत्री, कान्तिपुर साप्ताहिकमा कार्यरत कृष्ण भट्टराई र ईसिआर नामक एक रेडियोमा कार्यरत डिपी शाह चक्रवती रहेका छन् । सबै जनाले सहमतिमा एकले अर्कोलाई छोड्नुपर्छ, सहमतिमै मिलेर अघि बढ्नु पर्छ भनेका छन् । तर त्यस मध्येका दुई जनाले फरक धारणा राखेका छन् । डिपी शाहले भने लोकतन्त्रमा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने भएकाले आफु पनि प्रतिस्पर्धी हुने बताए ।
यस्तै नयाँ पत्रिकाका लक्ष्मण सुवेदीले अबको संघको नेतृत्व क्रमीक रुपमा आफ्नो काँधमा आउने बताए । उनले विगत पन्ध्र बर्ष देखी कार्य समिती सदस्य हुदै आफुले संस्थाको लागि काम गर्दै आईरहेको बताए । उनले आफु सदस्य हुदै महासचिव, उपाध्यक्ष र अब अध्यक्षको पालो आएको बताए । सबैलाई मिलाएर सदस्यहरुको हक र हितको पक्षमा काम गर्न आफ्नो नेतृत्व आवश्यक रहेको पनि उनले बताए । सहमतिमा अरु कसैलाई छोड्नु पर्ने भए के गर्नु हुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनले आफुले धेरै सोचेर काम गर्ने गरेको बताए । मैले एक पटक उम्मेदवारी दिएपछि फिर्ता लिने, अरुलाई बनाउने भन्ने हैन । म जे बोल्छु त्यो गर्छु त्यसैले सहमतिमा अरुले आफुलाई छोड्ने र आफुले संघको नेतृत्व गर्ने उनको दावी रहेको छ ।
यस्तै पुराना संचारकर्मी डब्बु क्षेत्रीले आफ्नो परिचय चलचित्र पत्रकारीतानै भएको र २५ बर्षको अनुभवलाई संघको नेतृत्वमा गएर काम गरेर देखाउन लागी पर्ने बताए । उनले पटक पटक आफुले संघको गतिविधीमा चासो राखेको र संघको हितको लागि काम गर्दै संघलाई यहासम्म ल्याएको प्रष्ट्याए । उनले संघलाई अझ उचाईमा लान र सदस्यहरुको हक र हितमा काम गर्न र अझ प्रभावकारी बनाउन आफ्नो नेतृत्वलाई साथीहरुले सहयोग गर्ने बताए ।
कान्तिपुर साप्ताहिकका कृष्ण भट्टराईले आफु संघको कार्यसमितीमा आएर काम गर्न ईच्छुक भएको बताए । उनले नयाँ पुस्ताले नयाँ किसीमका कामहरु गरेर देखाउन बाँकी रहेको बताए । उनले शुरुमा आफु महासचिवमा आउने चाहना भएको बताए पनि पछि सबै जनाले अध्यक्षमै आउन सुझाव दिएपछि अध्यक्षमा उम्मेद्वारी दिन तयारीमा रहेको बताए ।
यता हालका महासचिवले आफुलाई बलियो उम्मेद्वारीको रुपमा प्रस्तुत गरिने बताए । उनले पुरानालाई सम्मान र अबको नेतृत्व नयाँको काँधमा रहने हो भन्दै आफु सबैसँग मिलेर जाने बताए । उनले सबैसँग सहमति गरेर आफुनै नेतृत्वमा आउने पनि दावी गरे ।
यता हाल उपाध्यक्ष रहेका विष्णु सुवेदीले भने सहमति कायम गर्न सबैलाई अनुरोध गरेको बताए । उनले अरुमा सहमति हुन्छ भने आफु सहमतिमा जान तयार भएको बताए । नभए आफुमै सहमति गर्न समेत अनुरोध गरे ।
जेहोस् अध्यक्ष पदमा आंकाक्षा रहेका पत्रकारहरु बाट सहमतिको कुरा आएपनि कसले कसलाई छोड्ने भन्ने प्रष्ट निक्र्याैल छैन । यसर्थ छ जना मध्येबाट ३ जना बलियो रुपमा प्रतिस्पर्धामा आउन सक्ने आंकलन गरिएको छ । विष्णु सुवेदी कृष्ण भट्राई सँग सहमति हुन सक्ने, यस्तै लक्ष्मण सुवेदी र डब्बु क्षेत्रीमा सहमति हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । यसको वास्तविकता अब केही दिनमै थाहा हुनेछ । अन्तिम अवस्थामा आएर कृष्ण भट्टराई महासचिव हुन सक्ने केही सदस्यहरुले अनुमान गरिएको छ ।
यस्तै उपाध्यक्ष पदका लागि पाँच जनाको नाम प्रस्तुत भईरहेको छ । अनौपचारीक रुपमै पाँच जनाको नाम उम्मेद्वारको रुपमा आएको हो । संगठन उपाध्यक्षमा कार्यक्रम सिनेमा नेपालका प्रस्तोता तथा निर्माता दिनेश सिटौला एक्लै रहेका छन् । उनी चलचित्र पत्रकारको वृत्तमा सबैलाई मिलाएर जान सक्ने खुबी भएको सुचिमा पर्ने व्यक्ति पनि हुन् ।
टेलिभिजन पत्रकारीतामा सक्रिय उनको पदमा अरु कोही नआएमा संगठन उपाध्यक्ष निर्वीरोध हुनेछन् । यस्तै कार्यक्रम उपाध्यक्षमा तीन जनाको नाम रहेको छ । जसमा कान्तिपुर टेलिभिजनमा कार्यरत प्रदिप कार्की र सेतोपाटी अनलाईमा कार्यरत अशेष अधिकारी बलियो रुपमा प्रस्तुत भएका छन् । साथै रातोपाटी अनलाईनमा कार्यरत कुवेर गिरीले पनि आफुलाई बलियो उम्मेद्वारको रुपमा प्रस्तुत गर्ने दावी गरेका छन् ।
प्रदिप कार्की हाल कार्यसमितीका सक्रिय सदस्य पनि हुन् । उनले आफुले कार्यसमितीमा बसेर बटुलेको अनुभव मार्फत उपाध्यक्षको रुपमा पत्रकारहरुको क्षमता बढाउने कार्यक्रम ल्याउने बताएका छन् । ’अब संघले सदस्यको हक हित मात्र हैन उनीहरुको क्षमता पनि बढाउनु पर्छ जसले उनीहरुको जीवनयापनलाई सजिलो बनाओस’ कार्यक्रम उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने तयारी गरिरहेका प्रदीपले बताए । यद्यपि उनले संघको हितको लागि सबै मिलेर जानु पर्ने मै जोड दिएका छन् । चलचित्र पत्रकार संघको सर्लाही तथा महोत्तरी शाखाका सचिव रहेका प्रदीप अनलाइन , रेडियो हुदै यतिबेला कान्तिपुर टेलिभिजनको फिल्मी कार्यक्रम सिनेमा फेस्टसंग आवद्ध छन् ।
यता अशेष अधिकारीले पुराना कार्य समितीमा रहेका सबै पदाधिकारी समान हुने भएकाले सबैले संघको जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताए । उनले यो कार्य समितीबाट संघको उपलब्धी शुन्य भएकाले अब संघलाई दिशा निर्देश गर्न आफु संघमा कार्यक्रम उपाध्यक्षको रुपमा जान लागेको बताए । उनले सदस्यहरुको हक हितको लागि संस्था रहने भएकोले सदस्यहरु लक्षित कार्यक्रम गर्न कार्यक्रम उपाध्यक्षमा आउने बताए । संघ हाम्रो हो, हाम्रो लागि हो त्यसैले हामी, हाम्रो लागि हो यो बुझेर काम गर्ने हेतुले संघमा आउन उनको सुझाव छ ।
यता कुवेर गिरीको पनि आफ्नै विचार रहेको छ । संघमा आँफ्नो खाँचो भएकोले आउन लागेको उनको तर्क छ ।
यस्तै कुमार आचार्यले आफु पनि कार्यक्रम उपाध्यक्षमा आउने बताएका छन् । उनले आफुले धेरै सदस्यहरुसँग सम्झौता गर्न सक्ने भएकाले आफु आउन लागेको बताए ।
यस्तै महासचिवमा हाल सम्म अनिल यादव, विजय आवाज र राजन घिमीरेको नाम अनौपचारीक रुपमै आएको छ । अनिल यादव शुक्रवार साप्ताहिकमा कार्यरत छन् भने विजय आवाज अनलाईखबरमा छन् । यता फिल्मी कार्यक्रम क्ल्याप बोर्डका प्रस्तोता एंव निर्माता राजन घिमीरे यो पटक आफु महासचिवमा जितेरै छाड्ने दावी गर्छन् । उनले सके सहमतिबाट नभए निर्वाचन प्रणालीबाटै आफु महासचिवमा आउने बताए ।
अनिल यादव नयाँ जोश सहित नयाँ टिम सहित काम गर्न आउन लागेको बताए । उनले आफ्नो कसैसँग सम्झैता नहुने बताए । चलचित्र पत्रकार संघको कार्य पद्धती हेरेर अब नयाँ काम गर्नुपर्ने समय रहेको हुदाँ सदस्यहरु लक्षित नयाँ कामहरुलाई प्रथामिकता दिन आफु महासचिवमा आउन लागेको बताए ।
यस्तै विजय आवाज अहिलेको कार्य समिती सदस्य पनि हुन् । उनले आफ्नो अनुभवलाई काम गरेर देखाउनको लागि महासचिवमा आउन लागेको बताए । सदस्य हुदै महासचिवमा आउन लागेकोले पनि अरुले आफुलाई समर्थन गर्ने उनको दावी रहेको छ ।
यस्तै कोषाध्यक्ष पदमा नेपाल वान टिभीमा कार्यरत एंव हालकै कोषध्यक्ष कुवेर डंगोल र ईमेज टिभी र ईमेज एफ एममा कार्यरत श्याम अर्याल रहेका छन् । कोषाध्यक्ष पदमा रहेकाहरु मिलेर जान सक्ने संभावना देखिएको छ ।
यस्तै सचिव पदमा चलचित्र पत्रकारीताको बृत्तमा निकै सक्रिय व्यक्ति एंव फिल्मी खबर अनलाईनमा कार्यरत बैकुण्ठ पराजुली मात्रै देखिएको छ । उनी नयाँ सदस्य देखी पुराना अग्रजहरुलाई समेत सहकार्य गरेर अघि बढ्न सक्ने पत्रकार पनि हुन् । यस कारण उनको प्रतिस्पर्धाको रुपमा कोही आउन सकेका छैनन् । पछिल्लो समय उनले दुई दर्जन भन्दा बढीलाई नयाँ सदस्यताको लागि पहल गरिएको छ । पछिल्लो समय निकै संभावना बोकेको सदस्य पनि हुन् बैकुण्ठराज पराजुली । संघ संस्थामा रहेर क्रियाशिल काम गर्न उनी अनुभवी पनि छन् । पत्रकारहरुको हकहितको लागि संघले काम गर्नु पर्छ र संघमा काम गर्न सक्ने मान्छे आउनुपर्छ भन्नेमा उनी लागेका छन् । यसैमा आफैलाई उभ्याउँदै उनी सचिव पदमा प्रस्तुत भएका हुन् । संघको भोलीको नेतृत्वको रुपमा समेत आफु रहेकोले सचिव पदबाट काम गर्दै जाऊ भनेर आएको उनको दावी छ । यो पदमा उनी मात्रै रहे निर्विरोध हुनेछन् ।
संघले विधान संसोधन गरेर महिला उपाध्यक्ष, सह सचिव र सह कोषध्यक्ष थप गर्ने संभावना पनि रहेको छ । यदि यी पदहरु रह्यो भने गीता अधिकारी र दिपज्योती थापा महिला उपाध्यक्षका प्रतिस्पर्धी हुनेछिन् । गीता अधिकारी कमाण्डर पोष्टमा र्कायरत छिन् भने दिपज्योती कलिउड हंगामा अनलाईमा छिन् । सह सचिवमा जनसवाल दैनिक र काष्ठमण्डप टभिीमा कार्यरत समीर बलामी एक्लो देखिएका छन् । यस्तै सह कोषध्यक्षमा ठूलोपर्दा अनलाईनका जीवन पराजुली एक्लो उम्मेद्वार हुन् ।यी पदहरु थपिएनन् भने यी आकांक्षीहरु सदस्यमा आउँनेछन् ।
सदस्यहरुमा हाल सम्म सबैको प्यारो एंव चलचित्र वृत्तमा चिर परिचित मज्जाको अनलाईनमा कार्यरत उत्सब रसाईली र फोटो पत्रकार विनोद पोखरेल रहेका छन् ।यस्तै महिलामा मिडीया एनपिका बर्षा बस्नेत रहेकी छिन् । चलचित्र पत्रकार संघमै सबैभन्दा बढी मत ल्याएर जित्न सक्ने बलियो सदस्यको उम्मेद्वारमा उत्सब रहन सक्ने अनुमान गरिएको छ । उनी चलचित्र पत्रकारहरुमा मात्र नभएर, चलचित्रकर्मी, कलाकार र दर्शकहरुमा पनि चिरपरिचित नै छन् ।
यता महासचिवमा आउन सकिने संभावना देखिएको कान्तिपुर दैनिकमा कार्यरत शुशिल पौडेलले आफु यो पटक कुनै पदमा नआउने बताएका छन् । उनले आफ्नो सदस्यता पत्रकार महासंघमा रहेकोले स्थान्तरण गरेर चलचित्र पत्रकार संघमा ल्याउनेर यो पटक कुनै पदमा नआउने बताएका छन् । उनले यो पटक क्रियाशिल र काम गर्न सक्नेहरुको टिम बनाउन आफू पनि सक्रिय रुपमा लागि पर्ने बताएका छन् । संस्था र सदस्यहरुको हक र हितमा उभिन सक्नेहरुको टिम बनाउन आफुले सक्दो प्रयास गर्ने र बढि देखिएको महत्वकांक्षीहरुलाई सहमतिमा ल्याउन पहल गरिने पनि उनले बताए ।
नयाँ कार्य समितीमा आएको यी प्रतिस्पर्धीहरुलाई हेर्दा संघ अब नयाँ गतिमा अगाडी बढ्नेछ भन सकिन्छ । प्रतिस्पर्धा संस्था राम्रो बनाउनको लागि आवश्यक पनि छ । सके सहमतिमै नयाँ कार्य समिती बनाउन सकियोस् नसके लोकतान्त्रिक पद्धतीबाट । तर एउटा खेल जस्तै सम्झेर यसलाई सबैले सहज रुपमा लिनु जरुरी छ । जित्नेले हार्नेसँग मिलेर काम गर्ने र हारे पनि संस्थाकै सदस्य रहेर काम गर्ने सोच सबैमा हुनु जरुरी छ । यसकै हारजीतलाई लिएर व्यक्तिगत दुश्मनी गर्ने, रिसीबी बढाउने काम गलत हुनेछ । यसले न आफैलाई फाईदा गर्छ न संस्थालाई । जे होस् यसरी संघको साधारण सभा आउँदै गर्दा चलचित्र पत्रकारहरुमा निकै चहल पहल बढेको छ । अहिले अनौपचारीक रुपमा आफुलाई उमेद्वारीको रुपमा प्रस्तुत गर्नेहरुले पछि के गर्ने हो त्यो भने पछि नै थाहा हुनेछ । यी आकांक्षीहरुको औपचारिक उम्मेद्वारी आएपछि पुनः हामीले थप जानकारी प्रस्तुत गर्ने छौं ।